भर्चुअल ध्यान र योगमा बढ्यो आकर्षण- विश्व - कान्तिपुर समाचार
भर्चुअल ध्यान र योगमा बढ्यो आकर्षण
माघ ५, २०७७ नवीन पोखरेल
लन्डन — कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यतिखेर मानिसको जीवनशैली खुम्चिएको छ । आफन्त, साथीभाइ भेटघाट शून्य छ, सोसलाइज गर्ने माहोल छैन । कतिलाई आफन्तजन गुमाउँदा असह्य पीडा छ, कतिलाई जागिर गुमेर संकट ।
जीवन विज्ञान यूकेले गरेको योगसम्बन्धी भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी बेलायतस्थित नेपाली
यस्तो असहज परिस्थितिमा अहिले बेलायतका नेपालीले आफ्नो मन शान्त राख्ने उपाय रोजेका छन् भर्चुअल ध्यान र योग । आजकल नियमित भइरहेका त्यस्ता कार्यक्रममा बेलायतको नेपाली समुदाय पनि आकर्षित हुन थालेको छ ।
सोसाइटी अफ नेप्लिज फ्रोफेसनल्स यूकेका पूर्वउपाध्यक्ष दीप गिरीलाई चार वर्षअघिसम्म ध्यान वा योगप्रति चासो नै थिएन । चार वर्षअघि भारतबाट आएका गुरु डा. अभदूत बाबा शिवानन्दको प्रवचनपछि उनी ती गुरुका फलोअर भए । पछि उनले नेपाली गुरुहरूबाटै ध्यान र योग गर्न थाले ।
‘अहिले त बरु खाना छुट्छ, ध्यान छुट्दैन,’ जीवन विज्ञान यूकेले हालै आयोजना गरेको भर्चुअल सेसनमा सहभागी गिरीले भने, ‘स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्न, महामारीका बेला इम्युनिटी पावर बढाउन, अनुहारमा चमक, जोस जाँगर र आत्मविश्वास जगाउन पनि योग र ध्यान अत्यावश्यक रहेछ ।’
यी कर्मले चिन्ता व्यवस्थापन भई जीवन आनन्दसँग बिताउन सकिने विश्वास उनमा छ । गत फेब्रुअरीमा दर्ता भएयता क्रियाशील जीवन विज्ञान यूके नामक संस्थाले लकडाउनका बेला निःशुल्क भर्चुअल ध्यान र योगलाई निरन्तरता दिएको छ । उसले हालै मात्र ९ दिने वर्कसप र २१ दिन लामो योग सेसन गर्‍यो ।
कोरोनाले मानिस बढी विक्षिप्त अनि उनीहरूमा डर, त्रास सिर्जना हुने क्रम बढेपछि अहिले आफूहरूले सातै दिन दैनिक डेढ घण्टा योग, प्रणायाम र ध्यान गरिरहेको जीवन विज्ञान यूकेकी संस्थापक जीवन विज्ञान प्रशिक्षिका सरिता शर्माले जनाइन् । ती सेसनमा दैनिक सहभागिता झन्डै ५० हाराहारी छ ।
उक्त संस्थाले बालबालिकामा लक्षित नवप्रतिभा विज्ञान कार्यक्रम पनि सुरु गरिरहेको छ । गत वर्ष नेपाल गएर वोध विज्ञान, लय विज्ञान, चक्र विज्ञान साधना प्रशिक्षण गरी २१ दिन तालिम लिएर लन्डन आएपछि आफूमा धेरै परिवर्तन आएको बताउँछिन् शर्मा ।
‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि शारीरिक, सामाजिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा स्वस्थ मानिस नै पूर्ण स्वस्थ हो भनेको छ । तर हामीले आध्यात्मिक स्वस्थतर्फ कहिल्यै वास्ता गरेनौं’, शर्माले भनिन्, ‘त्यसकारण यो अति आवश्यक छ । कोरोनाले श्वासप्रश्वासमा असर गर्ने भएकाले अहिलेको महामारीमा प्राणायाम त झन् एकदम महत्त्वपूर्ण छ ।’ जीवन विज्ञान भनेको आफैंलाई अध्ययन गर्ने विज्ञान रहेको बताउँछिन् उनी । उनले भनिन्, ‘हामीले कहिल्यै आफ्नो शरीर, मन, भावना र चेतनालाई अध्ययन गरेनौं ।’
सोसाइटी अफ नेपलिज फ्रोफेसनल्स यूकेकी सहसचिव एवं उक्त संस्थाको आध्यात्मिक कार्यक्रम संयोजक सविता गिरी बेलायतका नेपालीमा ध्यान र योगप्रति चासो बढेको र यो अत्यावश्यक पनि भएको बताउँछिन् ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७७ ०८:०१
७० प्रतिशत पर्यटक आएकै दिन फर्किने गरेका छन् । ३० प्रतिशतको बसाइ एक दिन मात्रै हुने गरेको छ ।
माघ ५, २०७७ अमृता अनमोल
काठमाडौँ — कुनै भवितव्य नभए अब छ महिनाभित्र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुनेछ । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई सोझै बुद्ध जन्मस्थल ल्याउने प्रमुख उद्देश्यले यो विमानस्थल बनाइएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुनासाथ बाह्य मुलुकका पर्यटक सीधै भैरहवा हुँदै लुम्बिनी आउनेछन् । बुद्ध जन्मस्थलमा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढ्नेछ । उनीहरूलाई एकै छिन लुम्बिनी पुगेर मायादेवी मन्दिर र केही गुम्बा घुमाएर फर्काउने कि रोक्ने ? भुलाउन र बास बसाउन के गर्ने ? पर्यटक व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यसबाट स्थानीय बासिन्दाले फाइदा कसरी लिने ? लुम्बिनीवासीका लागि यो अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
लुम्बिनीमा पर्यटकको पहिलो गन्तव्य मायादेवी मन्दिर हो, जहाँ बुद्धको दरबार र उनको पाइला छन् । मन्दिरबाहिर अशोकस्तम्भ र पोखरी छन् । पर्यटकलाई केही बेर भुलाउन बुद्ध जन्मस्थलआसपास केही भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको छ । विभिन्न देशले कलात्मक गुम्बाहरू बनाएका छन्, जसले पर्यटकको ध्यान खिच्नेछन् । शान्ति स्तूप, बुद्ध स्मारक, संग्रहालय घुम्दा केही समय बित्नेछ । लुम्बिनीमा अहिले भएका संरचनाहरू राम्रोसँग अवलोकन गर्न झन्डै दुई दिन लाग्छ । अर्थात्, एक पर्यटकलाई लुम्बिनीभित्र मात्रै घुमाउन सके पनि दुई दिन अड्याउन सकिन्छ । बुद्धको मावलीघर देवदह, उनले उनन्तीस वर्ष बिताएको तिलौराकोट एवं कपिलवस्तुका बुद्धस्थल, अस्तिधातु रहेको नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम लगायत घुम्न गए थप तीन दिन बित्छ । तर, पर्यटकलाई पाँच दिनसम्म लुम्बिनीमा बसाउने र भुलाउने योजना अहिलेसम्म बनेको छैन । उपर्युक्त सबै ठाउँबारे बताउने कसले ? घुमाउने कसरी ? अन्योलै छ ।
मान्छेले कसरी असल बन्ने, दुःखबाट छुट्कारा पाउने र सबैको भलो हुने काममा केन्द्रित हुने भन्ने बुद्धशिक्षालाई विश्वका साढे २ अर्बभन्दा बढीले धर्मका रूपमा मान्दै आएका छन् । उनीहरूका लागि लुम्बिनी पर्यटकीय स्थल मात्र नभई मुख्य तीर्थस्थल हो । लुम्बिनी, बौद्धनाथ, सारनाथ र कुशीनगर गौतमबुद्धको जीवनसँग जोडिएका चार प्रमुख क्षेत्र हुन् । तीमध्ये लुम्बिनी सबैभन्दा पावन, पवित्र र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । बौद्ध साहित्य अनुसार, स्वयं बुद्धले आफ्ना अनुयायीहरूलाई जीवनकालमा एकपटक भए पनि लुम्बिनी भ्रमण गर्न भनेका छन् । त्यसबाट खराब कर्म पखालिने, पुण्य मिल्ने र असल कर्ममा लाग्न उत्प्रेरणा मिल्ने कथन छ । यही बुद्ध वचन अनुसरण गर्दै बौद्धमार्गीहरू लुम्बिनी आउने गरेका छन्, जुन क्रम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनपछि बढ्ने अपेक्षा छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार, हाल लुम्बिनीमा वार्षिक करिब १२ लाख स्वदेशी–विदेशी पर्यटक आउने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश धार्मिक पर्यटक हुन् । विमानस्थल सञ्चालनपछि वार्षिक २० लाख पर्यटक लुम्बिनी भित्र्याउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि लुम्बिनी आसपासका सडक फराकिला पारिएका छन् । तारे होटल खुल्ने क्रम बढेको छ । पर्यटकमैत्री रेस्टुराँ र बारहरू सञ्चालनमा आएका छन् । लुम्बिनी क्षेत्रभित्र साजसज्जा र आकर्षण बढाइएको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार विकासले मात्रै लुम्बिनीमा पर्यटक बढ्ने वा अडिने गर्दैनन् । धार्मिक पर्यटकहरू बुद्ध जन्मस्थलमा बुद्धमय वातावरण चाहन्छन् । बुद्धकालीन संस्कार र परम्परा, बुद्ध ज्ञान र कला हेर्न खोज्छन्, जुन होटल र रेस्टुराँमा होस्, बस्तीमा बस्ने र सडकमा भेटिने नागरिकमा पाइयोस् । विदेशी पर्यटकहरूलाई जे चाहिने हो, लुम्बिनीमा त्यसैको अभाव छ ।
लुम्बिनी होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघका अनुसार, बुद्ध जन्मस्थल आउने पर्यटकमध्ये ७० प्रतिशत त्यसै दिन फर्किने गरेका छन् । बाँकी ३० प्रतिशतको बसाइ एक दिन मात्रै हुने गरेको छ । एक दिनभन्दा धेरै बिताउने भनेका आआफ्ना देशका गुम्बाहरूमा बस्नेहरू मात्रै हुन् । लुम्बिनीको रमणीयता हेर्न आउने पर्यटकलाई लोभ्याउन र अड्याउन भौतिक सुविधा जरुरी हुन्छ । रम्ने–रमाउने र भुल्ने–भुलाउने ठाउँ चाहिन्छ । लुम्बिनीमा त्यसको पनि अभाव छ । लुम्बिनी विकास कोषबाहिरका क्षेत्रमा पर्यटक लैजाने र भुलाउने कुनै क्षेत्र तय गरिएको छैन । यही कारण धार्मिक आस्थाबाहेकका पर्यटकलाई पनि लुम्बिनी अड्याउन मुस्किल छ ।
बौद्ध परम्परामा बोधिसत्त्वले जन्म लिन काल, तिथि, स्थान, कोख र समाजको ठूलो महत्त्व हुन्छ । भनिन्छ, जम्बुद्वीपमा त्यस समय सबैभन्दा उत्तम क्षेत्र छनोट गरेर बुद्धले लुम्बिनीमा जन्म लिएका थिए । तथागतलाई धारण गर्न सक्ने मायादेवीको कोखलाई नारी शक्तिको आधार मानिन्छ । कपिलवस्तु, मावली देवदह, गौतम बुद्धको आठ भागको एक भाग अस्तुधातु रहेको रामग्राम क्षेत्र बुद्ध चरणका पवित्र क्षेत्रहरू हुन् । लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै तिलौराकोट, देवदह, रामग्राम र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दामा पनि बुद्धप्रति अपनत्व जगाउनुपर्छ । बुद्धले सिकाएका ज्ञान, बुद्धको जीवनी र बुद्धसँग जोडिएका कुरा सिक्ने र अपनत्व लिएर तिनलाई अरूलाई सिकाउने बनाउन आवश्यक छ । पथप्रदर्शकले धेरै कुरा भन्नुभन्दा स्थानीय बासिन्दाले थोरै कुरा देखाउँदा पनि पर्यटक लालायित हुन्छन् ।
लुम्बिनीमा दिगो पर्यटन तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब यस क्षेत्रका नागरिकको मनमस्तिष्कमा बुद्धप्रति गहिरो आत्मसम्मान हुन्छ । बुद्धलाई नबुझी दिगो पर्यटन सम्भव छैन । यसर्थ बुद्धभूमिमा बस्ने समुदायको हरेक गतिविधिमा बुद्धप्रति सम्मान, शिक्षा, मैत्री, संस्कार र उत्साह प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । बुद्धको व्यावहारिक ज्ञानलाई जीवनशैलीमा रूपान्तरण गराउनुपर्छ । बुद्ध संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । केही क्षेत्र र टोललाई पञ्चशीलमैत्री बनाउनुपर्छ । विद्यालय, युवाक्लब, महिला समूह लगायतमा बुद्ध संस्कारमय क्रियाकलाप गराउनुपर्छ । बुद्धप्रति सम्मान जनाउन हरेक पूर्णिमालाई उत्सवका रूपमा मनाउन थाल्नुपर्छ । लुम्बिनी आसपासका बस्ती सफा राख्नुपर्छ । आसपासका क्षेत्रमा समुदायकेन्द्रित होमस्टे सञ्चालन गरिनुपर्छ । होटल रेस्टुरेन्ट र सडक खाना महोत्सवहरूमा बोधिसत्त्व शैलीका परिकार उपलब्ध गराउनुपर्छ । बुद्धसम्बन्धी पोसाक, सामग्री, गहनाहरूको किनबेच र प्रयोग गर्नुपर्छ । होटलहरूमा बुद्धमय अभिवादन (भवतुः सब्ब मंगलम्) प्रयोग गर्नुपर्छ । पर्यटकलाई ठाउँठाउँमा बुद्ध जीवनी बताउने थिएटर, ध्यान अभ्यास र विपश्यनाको सुविधा दिनुपर्छ । अनि मात्र लुम्बिनीमा पर्यटकलाई धेरै दिन भुलाउन सकिनेछ, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लुम्बिनीमा गरिएको लगानीले सार्थकता पाउनेछ ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७७ ०७:५७